Ukugwema Ubugebengu e-UAE: Ukuziphendulela Ngobugebengu Kwamaqembu Ahililekile
I-Abetting isho isenzo sokusiza noma ukukhuthaza omunye umuntu ukuthi enze ubugebengu. Yimithetho yokubopha uzungu. Isibonelo, abangani ababili, u-X kanye no-Y, bahlela ukugebenga ibhange lapho u-X esebenza khona. Ngokohlelo, u-X, othatha imali ebhange, kanye nomuntu ongaphakathi bazohlinzeka ngevault yasebhange noma inhlanganisela ephephile ku-Y ukuze bagebenge ibhange.
Ngisho noma u-Y ezogebenga futhi u-X ezomsiza kuphela, u-X unecala lokusiza ebugebengwini. Umthetho uhlukanisa u-X njengohambisana naye. Kuyathakazelisa ukuthi u-X akadingi ngempela ukuba khona ngokoqobo endaweni yesehlakalo ukuze abe necala. Ezimweni eziningi, kukhona abathintekayo abangaphezu koyedwa namazinga ahlukene okubandakanyeka kanye nokuziphendulela kobugebengu.
Inkantolo kufanele icabangele ukuziphendulela ngobugebengu kwezinhlangothi ezithile ezithintekayo ebugebengwini. Ngokuvamile, amanye amaqembu asekela kuphela noma akhuthaze ukwenziwa kobugebengu ngaphandle kokubandakanyeka okuqondile. Abanye bahileleka ngokuqondile ngaphandle kokwenza ubugebengu. Umshushisi kumele ahlukanise ukuthi izinhlangothi ezahlukene zimsiza kanjani umenzi wobubi ekwenzeni ubugebengu futhi ashushise ngendlela efanele.
Umthetho wase-United Arab Emirates (UAE) Wokulwa Nobugebengu Emthethweni Wobugebengu
I-Abetment Of Crimes kanye nokwephulwa okuhlobene, okuhlanganisa nokusiza, kungamacala obugebengu ngaphansi Kwekhodi Yenhlawulo ye-UAE. I-Federal Law Number 3 ka-1987 mayelana ne-Penal Code ihlinzeka ngezimo ezimbalwa lapho umuntu angahlukaniswa njengomuntu obambe iqhaza, okuhlanganisa:
Uma umuntu elwela noma esiza ubugebengu obenzeke kulandela izenzo zakhe
Uma besebenzisana nabanye ukwenza ubugebengu bese kwenzeka ubugebengu obunjalo kulandela itulo lobugebengu
Uma bekhuthaza, besiza, noma begqugquzela ukulungiswa noma ukuqedwa kobugebengu. Ukusiza kungase kuhlanganise ukuhlinzeka ngamabomu izikhali noma amathuluzi adingekayo ukuze umenzi wobubi enze ubugebengu obunjalo.
Ngokufanelekile, ukungenelela ebugebengwini emthethweni we-UAE kuphatha lowo owenze isenzo esifanayo ngendlela ophatha ngayo umenzi wobubi, okuhlanganisa nokumjezisa. Empeleni, lowo ohlanganyele naye unesibopho sokujeziswa okufanayo nomenzi wobubi wangempela. Ngokuvumelana ne Isigaba 47 seKhodi Yezigwebo, umuntu otholwe endaweni yesigameko uyinhlangano enecala. Ngokuphambene, noma yimuphi umuntu ohileleke ngokuqondile ekuhlelweni kobugebengu ungumhlanganyeli oqondile ngisho nalapho engekho ngokoqobo endaweni yesigameko.
Umthetho elawula itulo lokuqeda ubugebengu inikeza izimo ezimbalwa lapho ibeka umuntu esigabeni njengomuntu ohlanganyele ngokuqondile noma njengesenzo sobugebengu noma umthetho e-UAE, okuhlanganisa:
Uma benza ubugebengu nomunye umuntu
Uma besiza noma bebamba iqhaza ebugebengwini futhi benza ngamabomu esinye sezenzo zobugebengu ezimbalwa
Uma besiza noma ngenhloso ukusiza omunye umuntu enze isenzo esinjalo, nalapho omunye umuntu ebalekela icala nganoma yisiphi isizathu.
Umthetho futhi uhlinzeka ngezimo lapho ubeka khona umuntu njengengxenye ngesizathu, okuhlanganisa:
Uma bekhuthaza noma begqugquzela omunye umuntu ukuthi enze ubugebengu
Uma beyingxenye yetulo lobugebengu elibandakanya iqembu labantu futhi ubugebengu obuhlanganisiwe buyenzeka njengoba bekuhleliwe
Uma behlinzeka ngesikhali noma ithuluzi lokusiza umenzi wobubi ekwenzeni ubugebengu
Ngokungafani nomuntu ohambisana naye ngqo, umhlanganyeli nge-causation kufanele abe endaweni yesigameko. Ngaphandle uma umthetho usho okuhlukile, inkantolo iphatha bobabili abahambisanayo ngembangela kanye nalowo ohlanganyele ngqo ngokufanayo, okuhlanganisa nokubajezisa njengomenzi wobubi wangempela.
Kodwa-ke, umshushisi kufanele anqume ukuthi lowo ohlanganyele ngesizathu wayenenhloso yobugebengu. Lapho abashushisi bengakwazi ukufakazela ukuthi umuntu otholakale endaweni yesigameko uhlose ukwenza ubugebengu, lowo muntu uyobalekela icala njengomuntu ohlanganyele naye. Empeleni, ukufakazela inhloso yobugebengu emacaleni abandakanya ukuhambisana nesizathu kubalulekile emthethweni olawula itulo lokuqeda ubugebengu.
Kodwa-ke, ukukhululwa okungaba khona kwesibopho sezomthetho noma ukujeziswa kosolwayo akusebenzi noma kudluliselwe kwabanye ababambisene nabo ebugebengwini. Ngokuvamile, wonke umuntu ohlangene ushushiswa ngamunye futhi ngokweqhaza lakhe elithile esenzweni sobugebengu. Nokho, uma belahlwa yicala, bonke babhekana nesijeziso esifanayo. Ngokuvamile, ukujeziswa kommeli e-UAE kubandakanya ukuboshwa noma ukuboshwa.
Ukusungula Inhloso Yokulwa Nobugebengu
Ngaphandle kobunzima bokushushiswa kwecala lokuhoxiswa, intshisekelo eyinhloko yenkantolo ukuthola inhloso yobugebengu yomlingani kanye nokuthi ukuvimbela kwabo kuyimbangela yesenzo sobugebengu. E-UAE, umthetho ujezisa noma yimuphi umuntu onecala lokungenelela ebugebengwini ngendlela efanayo nanjengeselelesi ngokunganaki indima yakhe esenzweni sobugebengu.
Uma ukhathazekile ngokuthi kungenzeka wenze ubugebengu noma uvalelwe amaphoyisa, a Ummeli Wobugebengu wase-UAE angakweluleka ngamalungelo nezibopho zakho. Sihlinzeka ngommeli ochwepheshe kanye nezinsizakalo zokwelulekwa kwezomthetho kuyo yonke i-UAE, okuhlanganisa i-Dubai, i-Abu Dhabi, i-Ajman, i-Sharjah, i-Fujairah, i-RAK, ne-Umm al Quwain. Uma ubhekene namacala obugebengu e-Dubai noma kwenye indawo e-UAE, ungathembela kwabanolwazi nabanolwazi Abameli bobugebengu base-Emirati eDubai ukuze sikuvikele enkantolo.